कस्तो अनौठो गाउँ ! जहाँ ठकुरीलाई छोइछिटो, गाउँमा भैंसीले टेके अशुद्ध – Everest Dainik – News from Nepal
कस्तो अनौठो गाउँ ! जहाँ ठकुरीलाई छोइछिटो, गाउँमा भैंसीले टेके अशुद्ध
बझाङ, असोज २० । बड्डी ज्याबन जिल्लाकै धेरै मठमन्दिर भएको गाउँ । करिब ३० परिवारको बसोबास रहेको यहाँ विभिन्न देवीदेवताका १२ वटा मन्दिर छन् । महादेव यहाँका मानिसले पुज्ने सबैभन्दा ठूला देवता हुन् भने सुल्जन, बरम, मठालिंग, भवानी, खोलालो र पसरौलप्रति पनि स्थानीयको विशेष श्रद्धा छ ।
डोलारी, लटाबाघ, डाँडाबाघ, धौल्पुर, वनदेवीका मन्दिरको धार्मिक महत्त्व भारतसम्मै फैलिएको छ । यहाँका मानिस आफूलाई महादेवका करिया ठान्छन् । सबैको आ–आफ्नै खेतबारी छ तर कसैको नाममा लालपुर्जा छैन ।
सबै जमिन महादेवको भएको विश्वास गर्छन् । त्यसैले जग्गा उपभोग गरेको मालपोतबापत प्रत्येक परिवारले दुई वर्षमा एउटा बोका महादेवको मन्दिरमा चढाउँछन् । ‘हामीले सरकारको हैन, महादेवको जग्गा उपभोग गरेको हुनाले मालपोत पनि महादेवलाई नै तिर्छौं,’ स्थानीय कल्याण बोहराले भने ।
उनीहरूले स्थानीय क्षत्री थरका मानिसमाथि अत्याचारी शासन लादेका थिए । क्षत्रीहरूले मह काटदा पहिलो चाका राजालाई बुझाउनुपथ्र्यो । भित्र्याएको नयाँ अन्न राजालाई नचढाई खान पाउँदैनथे । गोरस पनि सुरुमा राजालाई दिएपछि मात्र क्षत्रीहरूले उपभोग गर्नुपथ्र्यो ।
अत्याचार यतिसम्म थियो, कसैले विवाह गर्‍यो भने नवदुलहीलाई पहिलो रात राजाकहाँ सुत्न पठाउनुपथ्र्यो । तैपनि शक्तिशाली राजाको अत्याचारको विरोध गर्ने आँट कसैको थिएन ।
नेपालका अधिकांश मन्दिरमा बोकाको बलि दिने चलन छ । तर यहाँ रहेका देवर र भवानीको मन्दिरमा पाठीको बलि दिइन्छ । यो गाउँको अर्को एउटा अनौठो नियम छ, छानामा स्लेट, जस्ता तथा ढलान हाल्न नमिल्ने । त्यसैले गाउँका सबै घरमा खरको छाना छ । छाना खरबाहेक अन्य चिजले छाएमा देवता रिसाउने र अनिष्ट हुने विश्वास छ । ‘हामी देवताको आश्रयमा बाँचेका मान्छे, देउताले बनाएको नियम तोड्न सकेका छैनौं,’ स्थानीय विक्रम धामीले भने ।
यहाँका मन्दिरमा नयाँ वर्ष, दसैंको नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, चैते दसैं र श्रीपञ्चमीका बेला विशेष पूजा हुन्छ । विभिन्न ठाउँबाट भाकल गर्न र भाकल पूरा भएपछि पूजा गर्न वर्षमा २ देखि ३ हजार हाराहारी मानिस आउने गरेको स्थानीय कन्जडो धामीले बताए ।
विभिन्न ठाउँबाट आएका श्रद्धालु यहाँका मन्दिरमा तामाको ढाक्रो (एक प्रकारको बाजा), सुन, चाँदीलगायत सामान चढाउने गर्छन् । इच्छित वर प्राप्त भएको खुसीमा श्रद्धालुले सुन, चाँदी तथा तामाका सिक्का मन्दिर परिसरमा भएका रूख तथा मन्दिरका खम्बामा समेत ठोकेर जाने गरेको उनले बताए । १२ वटा मन्दिरमध्ये ५ वटामा तामाको छानो हालिएको छ ।
बर्सेनि सयौंको संख्यामा धार्मिक पर्यटक आउने गरे पनि यहाँका बासिन्दाले कुनै फाइदा लिन सकेका छैनन् । ‘यति विकट छ, कसैले प्रचार–प्रसार गरेको छैन ।
बड्डी ज्याबनमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको नगरपालिका प्रमुख धनबहादुर विष्टले बताए पनि स्थानीयवासी भने सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नभएको बताउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य देवकी मल्लले पनि यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताइन् । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
ट्याग्स: Baddi jyaban, bajhang